Tusiyaha Kooban ee ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah | vfxAlert official blog
Tilmaame Kooban: Falanqeyn dhakhso ah, faaiidooyin wanaagsan
Dejinta tiro badan oo tilmaamayaal ah oo ku qoran jaantus waa mid ka mid ah khaladaadka ugu badan ee ganacsatada laylisyada doonaya inay fahmaan sida calaamadaha ikhtiyaariga ah ay u shaqeeyaan . Toban Celcelis Dhaqdhaqaaqa, shan oscillators iyo tilmaamayaasha laba mug leh kuma darayaan saxnaanta calaamadaha. Kala xulashooyinka muddada-gaaban ah, ma jiro waqti lagu ilaaliyo wax walba; waxaad u baahan tahay inaad gaarto go'aanno degdeg ah. Tilmaamaha "Kooban" ee ka socda vfxAlert ayaa kaa caawin kara tan.
Tilmaamayaasha kooxdani waxay muujinayaan dhaqdhaqaaqa suuqa ee hadda jira iyo isu dheelitirka awoodda iibsadayaasha / iibiyeyaasha oo ah qaab miisaan ah. The «diirimaad» midabka miisaanka, ayaa sii xoogeysanaya isbeddelka ama xiisaha furan. Fallaaro ayaa loo isticmaali karaa halkii miisaanka.
Awoodda isbeddelka, mugga xiisaha furan, waxaa lagu go'aamiyaa "kuleylka" cabbirka muujinta midabka. Fiiri tusaalooyinka:
«Kooban» waa qayb ka mid ah oo adag «mitir xawaare» tilmaanta, taas oo aad ka akhrisan kartaa in si faahfaahsan on blog ah . Aynu ku rakibno guddiga shaqada.
Lamaanaha lacagaha iyo waxyaabaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ayaa la heli karaa. Qaybta cas ee miisaanka ayaa mas'uul ka ah PUT-option, oo cagaar u ah CALL-option. "Dhex-dhexaad" ma muujineyso wax isbeddel ah. Way fududahay; aan toos ugu tagno tusaalooyinka isticmaalka.
Waxaan ka ganacsan oo keliya "Soo Koobid"
Waxay u muuqan kartaa kuwa bilowga ah iyadoo la adeegsanayo oo keliya cabbirka "kuleylka" tilmaame ayaa ku filan in la bilaabo ganacsiga iyada oo aan la helin xaqiijin dheeraad ah. Xaqiiqdii, tani maahan kiiska, qaababka farsamada iyo laambadda ayaa baabiin kara xitaa calaamado ganacsi oo nool oo nool "Kooban"! Aynu eegno tusaalooyinka qaarkood:
Muhiim! Waxaan eegeynaa dhaqdhaqaaqa sicirka iyo calaamadaha tilmaamaha hal xilli oo TAARIIKH AH , markii ay horeyba u cadaatay in la furo ikhtiyaar iyo in kale. Suuqa dhabta ah, kaliya isbeddelka sicirka ee hadda jira ayaa muuqda, way ka sii adag tahay go'aanka:
Calaamadaha Bitcoin waxay ku egtahay waqtiga daqiiqadaha 15. Way suurtagashay in la furo PUT-option laakiin fiiri laba shumacyo kor u socda bartamaha hoos u dhaca. Haddii heshiiska lagu furay laambaddii hore, waxay ku xirmi doontaa dhicitaankiisa gaaban ee laga jaray.
Ethereum . Halkan, tilmaamuhu wuxuu ku shaqeeyaa isagoo si sax ah u muujinaya dhaqdhaqaaq dhinac ah oo suurta gal ah inuu xagga hore u rogo
Digniinta beenta ah ee Litecoin . Hoos-u-dhaca muddada-dheer ee is-waafajinta muddada-gaaban, taas oo ka dhigaysa mid aan suurtagal ahayn in la furo xulashada CALL. Markaad tixgelineyso in fursadaha lacag-bixintu had iyo jeer ka yar yihiin 100%, waxaad u baahan tahay ugu yaraan laba meheradood oo soo socda oo faa'iido leh oo isku xiga si aad u magdhawdo khasaaraha.
«Soo Koobid» + istaraatijiyad
Hadda aan xaqiijinno xogta tilmaanta adoo adeegsanaya istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh. Si tan loo sameeyo, qaado halyeeyada "Triple Screen" ee uu qoray Alexander Elder, halkaas oo saddexda wakhti loo isticmaalo in lagu furo ganacsi: "yar", "dhexdhexaad" iyo "dheer".
Mabda 'aasaasiga ah ayaa ah in wakhti kasta oo soo socdaa uu ugu yaraan 5 jeer ka weynaan doono kii hore. Xulashooyinka muddada-gaaban ee lammaanaha lacagta ugu muhiimsan iyo ganacsiga maalinlaha ah ee crypto, isku-darka "M1-M5-M15" ayaa ku habboon.
Waxaan heshiis la fureynaa dhicitaanka 5-10 daqiiqadood waqtiga "celceliska" (M5), dhammaantoodna waxay leeyihiin isku mid. "Soo Koobid" waxay kuu oggolaaneysaa inaad si dhaqso leh u falanqeyso xaalad adiga oo aan u kala beddelin jaantusyo badan.
Shaandhaynta dheeraadka ah ee "buuqa" suuqa, taas oo wax badan ku leh calaamadaha crypto, waxaad dejin kartaa Stochastic oo leh muddo 20-30 ah. Sidoo kale, fiiri dheellitirka «Bull & Bears» on Speedometer. Haddii dheelitirku ka soo horjeedo calaamadda weyn, ka bood oo sug tan xigta!
«Soo Koobid» + qaababka laambadda
Falanqaynta muuqaalku waxay sii wadaa inay tahay mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee falanqaynta suuqa. Waxay leedahay dib u dhac ka yar midka farsamada. Qof khibrad leh ayaa arki kara isbeddelka isbeddelka ama sii socoshada isbeddelka hadda jira ee ka dhaqso badan xitaa calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ugu sarreeya. Aynu eegno tusaalooyinka:
Waqtiga M5, waxaa ku yaal guri dheer, oo ay caddeeyeen tilmaamayaasha. Qiimuhu wuxuu ku socdaa meel cidhiidhi ah oo leh soo-celinta xuduudaha. Sidaad ku ogtahay falanqaynta farsamada, marba marka ka dambaysa isbeddelku, ayaa ku sii dhowaanaya dhammaadkiisa. Intaa waxaa dheer, labada xuduudaha waxay lahaayeen dhowr jeer oo tijaabin ah, markaa waxaad u baahan tahay inaad isu diyaariso burburka. Laakiin kor ama hoos?
Si tan loo sameeyo, aan tagno M1, halkaasoo PUT-option ay suurtagal tahay. Jaantuska, waxaa ku yaal qaab shumac shaashad oo tilmaamaya hoos u dhac. Kani waa calaamadda horseedka ah ee 'crypto', waxaad ka furan kartaa ganacsi M5 ah dhicitaankiisa daqiiqadaha 10-15.
«Soo Koobid» ayaa markale soo jiitay dareenka ganacsadaha falanqeyn faahfaahsan iyo kala duwanaanta xulashada cusub. Xaaladda ka soo horjeedka sidoo kale waa suurtagal - qaabka laambadda ayaa joojiya calaamadaha. Xaaladdan oo kale, waxay leedahay miisaan ka badan tilmaame!
Wixii loogu talagalay ganacsiga 'crypto trading on dashboard', tilmaame loogu talagalay BTC / USD ayaa loo baahan yahay. Bitcoin waa lacagta ugu muhiimsan iyo altcoyinyada oo dhan, in kasta oo dib u dhac ku yimaado, raac isbeddelkeeda. Marka laga reebo Ethereum - waxaa jiri kara dib u noqosho iyo sixitaan, sida caadiga ah marka lagu daabacayo warar muhiim ah lacagta. Waxaa jira marar dhif ah mala-awaal muddo-gaaban ah oo aan u horseedin dib-u-noqosho isbeddel ah.
Waxaan u adeegsanaa kaliya Forex iyo calaamadaha ganacsiga crypto ee software-ka vfxAlert. Waad ka ganacsan kartaa ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee muddada-gaaban, laakiin waa keliya marka ay jirto xaqiijin dheeri ah.
Isku halaynta calaamadaha binary ganacsiga ayaa kordha marka qiimaha uu ku jabo heerarka Pivot Point: R2-3 oo loogu talagalay CALL-option (BUY zone on Summary) ama S2-3 loogu talagalay PUT-option (SELL zone).
Wixii Forex! Intii lagu guda jiray daabacaadda wararka aasaasiga ah iyo tirakoobka, ma fureyno xulashooyin 30 daqiiqo ka hor warka iyo 30 daqiiqo ka dib daabacaadda; ganacsatada taxaddarka leh way xiri karaan heshiisyada hadda socda. Si loo xakameeyo dhacdooyinka, waxaan isticmaalnaa jadwalka dhaqaalaha ee ku jira dhammaan meheradda ganacsiga binary ee caanka ah!
Waxa ugu muhiimsan ee qalab falanqeyn farsamo ama istiraatiijiyad waa in la fahmo sababta calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ay u muuqdeen, si ay u sii ahaadaan kuwa dulqaad leh, ka ganacsanaya kaliya kuwa ugu kalsoon ee iyaga ka mid ah. Adeegso "Summary" si aad u xaqiijiso fikradahaaga, aad uga hesho faa'iido wixii hanti ah. Xitaa suuqa sida isbeddelka sida suuqa cryptocurrency.